TuneUp Utilities 2014 14.0 ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » System Tools » TuneUp Utilities 2014 14.0
By နေမင်းမောင်9:27 AMNo comments
TuneUp အသုံးပြုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Full Version ရအောင် အထဲမှာ Crack File လေးရော Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့အချက်လေးတွေကတော့ ...
၁။ Tuneup Drive Defrag
Harddisk မှာ တစ်စစီပြန့် ကျဲနေတဲ့ file တွေ ကို စနစ်တကျ ပြန်လည်စီရီပေးခြင်း၊ window လုပ်ဆောင်နိုင်မှု့ ပမာဏကို မြင့်တင်ပေးခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
၂။ TuneUp StartUp Manager
Window StartUp မှာ applications တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ module လေးပါ ( ဥပမာ- လိုအပ်တဲ့ application တွေကို automatic start လုပ်ခြင်း၊ မလိုအပ်တဲ့ Application တွေ ကို Automatic start မလုပ် စေခြင်း)
၃။TuneUp System Optimizer
System , system configuration , internet တို့ကို speeds up ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
၄။ TuneUp Registry Defrag
Registry ထဲက physical errors တွေကို ပြုပြင်မှန်ကန်သွားစေခြင်း ပြန်လည်စီရီပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။
၅။TuneUp Memory Optimizer
မလိုအပ်တဲ့ physical Memory ကို freeup , clear ,move ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ module လေးပါ သူရဲ့ ထူးခြားချက် ကတော့ သူကို run လိုက်တာနဲ့notification area ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြသနေမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ window startup မှာ လဲ
automatic load ပေးထားလို့လဲရပါတယ်….
Categorie – Free up disk space
၁။ Unnecessary files and backups
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ် မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ remove လုပ်နိုင် Disk system ထဲထိ virus ၀င်နေတဲ့ အခါ backup ပြုလုပ်လိုတဲ့ အခါမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။
၂။ Windows function ဒီ module လေးကတော့ User တိုင်းအတွက်မလိုအပ်ပါဘူး( ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါမှ မသုံးဘူးသေးပါ..:P)
Hibernation (hibernation n. A state in whichacomputer shuts down after saving everything in memory to the hard disk. When the computer is powered on, programs and documents that were open are restored to the desktop. See also standby. )ကို အသုံးပြုတဲ့ user များအတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်အဲ window messenger ကို မျက်စိ ရှုပ်နေသူများကတော့ ဒီမှာ အလွယ်တကူ remove လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ..
၃။ TuneUp Disk Space Explorer
Window system မှာပါတဲ့ disk clean up နဲ့ အတူတူပါပဲ ပိုမိုကောင်းမွန် တဲ့ အချက်ကတော့ File type အမျိုး အစားလိုက် ခွဲခြားပြီးတော့Number,Size,Percent တို့နဲ့ ဖော်ပြပေးခြင်းပါပဲ .. ။
Category- Maintain windows
၁။ Tuneup ကို Run ပြီးတာ နဲ့ အလွယ်တစ်ကူ အသုံးပြု လို့ ရအောင် ပေးထားတဲ့ module လေးပါ လူတိုင်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ၊ systems ကို cleans လုပ်ပေးခြင်း၊စီရီပေးခြင်း( defragements) တို့လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။ defragement လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကတော့ 08 မှစတင်ပါရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ် ... ။
၂။ TuneUp Registry Cleaner
အသုံးမ၀င်၊ မှားယွင်း ဒါမှမဟုတ် update မဖြစ်တော့တဲ့ entries , refrences တွေကို Remove လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ် ..။
Category- Solve problems
၁။ TuneUp Disk Doctor
တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ module လေးပါDrives မှာရှိတဲ့ errors တွေကို ရှာဖွေပေးခြင်း၊ မှန်ကန်အောင် ပြုပြင် ပေးခြင်း တို့လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။
၂။Tuneup Repair Wizard
Window, display မှာ အများဆုံးဖြစ် တတ်တဲ့ problems တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် Wizard ကို Run ပြီး တဲ့ အခါ Select the problems that occur with you လိုမေးထား ပါတယ် ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ problems အပိုင်းလေးတွေကို check ပေးပြီး Next ပေးလိုက်ယုံပါပဲ ..။
၃။ TuneUp Undelete
တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ module လေးပါပဲ shit+Delete နဲ့ ဖျက်လိုက်မိလို့ Recycle Bin ထဲကနေ လဲ ပြန် ခေါ်လို့မရ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ဒါလေးကလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ နဲ့ recovers လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် .. ။
Category- Customize Windows
၁။ TuneUp System Control
ဒီမှာကတော့ windows, programs ,internet settings တွေ Appearance, Start menu , taskbar စတာ တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ် တော်တော် လေးစုံလင်တာကို တွေ့ရပါတယ် မိမိကွန်ပျုတာကို Network မှာ ဖျောက်ထားနိူင်တဲ့Security လိုဟာမျိုးကစပြီး Mouse, keyboard စတဲ့ Input Options တွေအဆုံး ဒီနေ ရာလေးမှာ ပဲ ကြိုက်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ် .. ။
၂။ TuneUp Styler
ဒီ module လေးကတော့ Boot screen, Logon Screen, Visual Style Icon size စာတာတွေကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပါတယ် .. ။
Category- Additional tools
၁။TuneUp Processor Manager
လက်ရှိ မိမိစက်မှာ run ထားတဲ့ programs တွေကို manage ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Task manager နဲ့ သဘော တရား ခြင်းအတူတူပါပဲ .. ။
၂။TuneUp Registry Editor
ဒီ Editor လေးက တော့ registry ကို ပြောင်းလဲ တာတွေEnable, disblae လုပ်တာတွေ ကို ကူညီပါလိမ်မယ် Run commandကနေ regedit လို့ ခေါ်ပြီး သုံးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ ... ။
ဒီ tool လေးကလဲ တော်တော်အ သုံးဝင်ပါတယ်Software တစ်ခုကို uninstall လုပ်လို့မရ C ထဲမှာ သွားဖျက်လို့ လဲ မရ ဖြစ်နေတဲ့ အခါမျိုးတွေ မှာအလွယ်တစ်ကူ ဖျက်နိုင် ပါတယ် Kesper တင်ပြီးပြန် ဖြုတ်လို့ မရ ၊ ဖျက်လို့မရ ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေနိုင်စေရန်အတွက်ပါ။
၄။ TuneUp System Information
မိမိကွန်ပျူတာ မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Drives, Devices,Performance, Communciation စတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ နေရာလေးပါ ..။
၅။TuneUp Uninstall Manager
Add or Remove program ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်Add or Remove မှာ လို programs ၂ခု ၃ ခု လောက် uninstallလုပ်လိုက်ရင် ရွေ့ မရ ပြုမရနဲ့ ကြောင်စီစီ ဖြစ်သွားတာ မျိုးမရှိပါဘူး Uninstall လုပ်ပြီးပေမဲ့ entry ကျန်ခဲ့တာ မျိုးကို လဲ တစ်ခါထဲ remove လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
Features အကြောင်းကို ကိုဖြိုးငြိမ်းရေးပေးထားတာကို ကျွန်တော်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။။